Uchwepheshe we-Semalt: Umhlahlandlela Wokuhlunga ama-Subdomains ku-Google Analytics
Lezi zinsuku, kubaluleke kakhulu ukusetha izihlungi zenkambiso nezizinda ezingaphansi kwe-Google Analytics. Lokho kuzokuvumela ukuba uhlaziye, uhlole futhi ubheke ithrafikhi yewebhusayithi yakho kanye nemithombo yabo. Kungakhathaliseki ukuthi unayo ibhulogi, iwebhusayithi yenkampani, amakhasi amaningana okufika noma isayithi lokubambisana, kubalulekile ukuhlunga izizinda ezingaphansi.
Lapha u-Andrew Dyhan, oyedwa wezazi ezihamba phambili ezivela ku uSemalt , ukhulume ngamathiphu alula kulokhu.
Setha i-Google Analytics
Isinyathelo sokuqala ukusetha i-Google Analytics kuma-subdomains wakho. Kufanele usebenzise amakhodi afanayo noma ahlukile e-UA futhi uwagcine egcina endaweni ethile kukhompyutha yakho. Kungase kubonakale kulula, kodwa kufanele ukhumbule ukuthi akuwona wonke amawebhusayithi asebenzisa izakhiwo ezifanayo ze-UA. Kumele udale izihlungi ezihlukene ezizindeni ezihlukene futhi uqinisekise ukuthi amakhodi afakwe kahle.
Yakha umbono omusha ku-Google Analytics
Okulandelayo, kufanele udale ukubukwa okusha ku-Google Analytics. Uma uvula i-akhawunti yakho ye-Google Analytics bese uya kudeshibhodi yakho, kufanele ulungise izilungiselelo kusuka ekhoneni eliphezulu kwesokudla lapho imenyu yomlawuli ikhona. Lapha ungafaka izizinda eziningi ngangokunokwenzeka. Into kuphela okumele uyikhumbule ukuthi ukhetha izihlungi ezihlukene kumawebhusayithi ahlukene futhi udale ukubukwa okusha njalo lapho isayithi lifakwe lapha..
Dala ukubukwa kokuhlola
Uma ususha ku-Google Analytics, singakutusa ukuthi udale ukubukwa kokuhlola ukuze ugweme noma iyiphi inkinga. Ku-domain ngayinye nangaphansi kwesizinda, ungakha ukubuka okuhlukile kokuhlolwa okuzoqinisekisa ukuthi ugweme wonke amaphutha. Khona-ke ungathola ukufinyelela kwedatha yakho ye-traffic eluhlaza ukuze wazi ukuthi le nqubo isebenza kanjani.
Sebenzisa izihlungi zenkambiso
Uma usudale imibono emisha, isinyathelo esilandelayo ukusebenzisa izihlungi zangokwezifiso. Ngalokhu, kufanele ukhethe isigaba sesihlungi esijwayelekile bese uya inkinobho yomsakazo. Chofoza kuleyo nkinobho bese ungeze ama-subdomains akho lapha ukuze uqalise. Ukwengeza isihlungi esingokwezifiso kungenye yezindlela eziphelele kakhulu futhi ezimangalisayo ukuze wenze umsebenzi wakho ufeze kahle.
Engeza uhlu lokungabikho lokudluliselwa
Ukwengeza uhlu lokukhishwa kwezintambo kuwumqondo omuhle njengoba kuzovimbela ama-subdomains akho ukuthi athole ithrafikhi engafanele nephansi. Kulokhu, kufanele ukhethe impahla yakho noma i-subdomain. Uma usukhethiwe, ungachofoza inkinobho yokwaziswa kokulandelela bese uthola uhlu oluphelele lokudluliswa kokudluliselwa. Lapha ungakwazi ukwengeza ama-URL wakho we-subdomain bese uqaliswa.
Iyini isizinda esilandelayo nokuthi ungayilandela kanjani?
Uma unamakhasi ewebhu ambalwa ama-URL angama-www.abc.com noma okunye okunye, kulula ukuthi ube nama-subdomain ozikhethelayo futhi inombolo yawo ayinqunyelwe. I-subdomain iyisizinda esisodwa esakhiwe ngaphansi kwewebhusayithi yakho eyinhloko futhi ingenziwa isebenze noma ingasebenzi noma kunini. Ngokuvamile, uma abasebenzisi behambela isevisi eyodwa yokubamba komunye, kulula ngabo ukugcina izizinda ezifanayo futhi lokhu ngeke kuphazamise idumela labo jikelele kwi-intanethi. Futhi, ukudalisa isizinda sakho kulula njengoba igama lesizinda eliyinhloko lizokhokhela wena futhi ukukhokha kuzothunyelwa ngokuzenzakalelayo kusuka kwikhadi lakho lesikweletu noma ku-PayPal yakho.